Waxsansheeg News - Northvolt, shirkada batroolka lithium ee ugu horreysa Yurub, waxay heshaa taageero deyn bangi oo dhan US $ 350 milyan
Northvolt, oo ah shirkadda batroolka maxalliga ah ee lithium-ka ugu horreeya ee Yurub, waxay heshaa taageero deyn bangi oo dhan US $ 350 milyan
Sida laga soo xigtay warbixinnada warbaahinta shisheeye, Bangiga Maalgashiga ee Yurub iyo shirkadda soo saarta batteriga ee Northvolt ayaa kala saxiixday heshiis amaah $ 350 milyan oo doolarka Mareykanka ah oo lagu siinayo taageerada warshaddii ugu horreysay ee batroolka lithium-ion ee Yurub.
Sawir ka yimid Northvolt
Bishii Luulyo 30, waqtiga Beijing, sida ay sheegayaan warbixinnada warbaahinta shisheeye, Bangiga maalgashiga ee Yurub iyo soo-saare batteriga Sweden ee Northvolt ayaa kala saxiixday heshiis amaah ah $ 350 milyan oo doollar si ay taageero ugu siiyaan warshadda batrool ee ugu horreysa ee batrool-lion ee Yurub.
Maalgelinta waxaa bixin doona Sanduuqa Maalgelinta Istaraatiijiyadeed ee Yurub, oo ah tiirka ugu weyn ee qorshaha maalgashiga Yurub. Sannadkii 2018, Bangiga maalgashiga ee Yurub wuxuu kaloo taageeray abuuritaanka khad soo saaritaan oo loo yaqaan 'Northvolt Labs', kaas oo la soo saaray dhammaadka sannadka 2019, isla markaana uu jidka u xareeyay warshaddii ugu horreysay ee maxalli ah ee Yurub.
Warshad cusub oo loo yaqaan 'Northvolt's plant gigabit' ayaa hadda laga dhisayaa Skellefteé oo ku taal waqooyiga Sweden, oo ah goob kulan muhiim ah oo loogu talagalay alaabada ceeriin iyo macdan qodista, oo leh taariikh dheer oo soo saarista iyo dib u warshadeynta. Intaas waxaa sii dheer, gobolka ayaa sidoo kale leh saldhig tamar nadiif ah oo xoog leh. In laga dhiso warshad waqooyiga Sweden waxay ka caawin doontaa Northvolt in ay 100% tamarta dib loo cusbooneysiin karo ay ka soo saarto soosaarkooda.
Andrew McDowell, oo ah gudoomiye kuxigeenka Bangiga maalgashiga ee Yurub, wuxuu tilmaamay in ilaa iyo markii la asaasay Ururka Batroolka Yurub ee 2018, bangigu uu kordhiyay taageeradiisa silsiladda qiimaha batteriga si kor loogu qaado aasaasida istiraatiijiyadda istiraatiijiyadeed ee Yurub.
Tiknoolajiyadda bateriga quwadda ayaa fure u ah sii wadidda tartamada Yurub iyo mustaqbal kaarboon yar. Taageerada maaliyadeed ee Bangiga Maalgashiga Yurub ee Waqooyigavolt waa muhiimad weyn. Maalgashigani wuxuu muujinayaa in dadaalka saxda ah ee bangiga ee dhinacyada maaliyadeed iyo teknolojiyada uu ka caawin karo maalgashadayaasha khaaska ah inay ku biiraan mashaariicaha balan qaada
Maroš Efiovich, M / weyne kuxigeenka EU oo mas'uul ka ah midowga Batroolka Yurub, ayaa yiri: Bangiga maalgashiga yurub iyo gudiga yurub waa iskaashi istiraatiiji ah oo midowga EU Battery EU. Waxay si dhow ula shaqeeyaan warshadaha baytariga iyo dowladaha xubnaha ka ah si ay ugu suurtogeliyaan Yurub inay u guuraan aaggan istiraatiijiga ah. U hel hoggaan caalami ah.
Northvolt waa mid ka mid shirkadaha ugu waaweyn Yurub. Shirkaddu waxay qorsheyneysaa inay dhisto Gigafactory ugu horreysa ee maxalliga ah ee Yurub oo leh qiiqa ugu yar ee kaarboon. Iyada oo lagu taageerayo mashruucan farshaxanka-farshaxanka, Midowga Yurub wuxuu kaloo aasaasay yool u gaar ah oo lagu horumarinayo adkeysiga Yurub iyo istiraatiijiyadda istiraatiijiyadeed ee warshadaha iyo teknoolojiyadda muhiimka ah.
Northvolt Ett wuxuu u adeegi doonaa saldhigga wax soo saarka ugu weyn ee Northvolt, mas'uulna ka ah diyaarinta agabyada firfircoon, isu imaatinka baytariga, dib u warshadaynta iyo agabyada kale ee taakuleynta ah. Hawlgal buuxa kadib, Northvolt Ett wuxuu marka hore soo saari doonaa 16 GWh oo ah batteriga sanadkiiba, oo wuxuu ku fidi doonaa awooda 40 GWh mustaqbalka. Baytariyada Northvolt waxaa loogu talagalay gawaarida, kaydinta burooyinka, warshadaha iyo codsiyada la qaadan karo.
Peter Karlsson, oo ah isuduwaha aasaaska ahna madaxa shirkadda Northvolt, ayaa yiri: “Bangiga maalgashiga yurub wuxuu door muhiim ah ka ciyaaray sameynta mashruucan suurta gal bilowgii. Northvolt wuu ku mahadsan yahay taageerada bangiga iyo midowga yurub. Yurub waxay u baahan tahay inay dhisto iyada oo ay weheliso silsilad saare ballaaran oo batrị ah, Bangiga Maalgashiga ee Yurub wuxuu asaas u dhigay howshan. ”